दश वाणिज्य बैंकसहित १३ कम्पनीको उच्च शेयर माग, कुनको कति ? - नेपालबहस
दश वाणिज्य बैंकसहित १३ कम्पनीको उच्च शेयर माग, कुनको कति ?
| १७:५७:०२ मा प्रकाशित
२० जेठ, काठमाडौं । बिहीबार शेयरबजारमा १३ कम्पनीको शेयर खरिद माग उच्च रहेको छ । यस दिन दश वाणिज्यबैंकसहित ३ कम्पनीको शेयर खरिद माग उच्च देखिएको हो ।
यस दिन नेपाल बैंक, सिभिल, नेपाल बंगलादेश, मेगा, माछापुच्छ्रे, प्रभु, सिटिजन्स, लक्ष्मी र प्राइम बैंकसहित १३ कम्पनको शेयरमा उच्च खरिद माग आएको हो ।
त्यस्तै, नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक, अरुण भ्याली हाइड्रो र नेशनल हाईड्रोको शेयरमा उच्च शेयर खरिद माग रहेको छ । यस दिन सबैभन्दा बढि नेशनल हाईड्राको शेयरमा खरिद माग आएको छ ।
यस दिन सबैभन्दा बढि नेशनल हाइड्रोको शेयरमा उच्च खरिद माग आएको छ । कम्पनीको शेयरमा ४ लाख ९३ हजार कित्ता शेयर खरिद माग रहेको छ ।
कम्पनीको शेयरमा ४ लाख ९३ हजार कित्ता शेयर खरिद माग आउदा १ लाख ९४ हजार बढि कित्ता बिक्री आदेश रहेको छ ।
नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको शेयरमा ४ लाख ९३ हजार कित्ता खरिद माग रहेको छ । बैंकको शेयरमा ४ लाख ९३ हजार कित्ता खरिद माग आउँदा २ लाख १८ हजार कित्ता बिक्री आदेश रहेको छ ।
यस दिनसम्म बैंकको शेयरमूल्य ५३२ रुपैयाँ पुगेको छ । पछिल्लो केही दिन बैंकको शेयरमा सबैंभन्दा बढि खरिद माग रहेका छ ।
यस दिन लगानीकर्ता नेपाल बैंकको शेयरमा झुम्मिएका छन् । बैंकको शेयरमा ३ लाख ४७ हजार कित्ता शेयर खरिद गर्न लगानीकर्ता झुम्मिएका हुन् । कम्पनीको शेयरमा ३ लाख ४७ हजार कित्ता शेयर माग आउँदा बिक्री आदेश १ लाख ७६ हजार कित्ता रहेको छ ।
अरुण भ्याली हाइड्रोको शेयरमा उच्च खरिद माग आएको छ । कम्पनीको शेयरमा ३ लाख २३ हजार कित्ता शेयर खरिद माग रहेको छ ।
कम्पनीको शेयरमा ३ लाख २३ हजार कित्ता शेयर खरिद माग आउदा १ लाख बढि कित्ता बिक्री आदेश रहेको छ ।
नेपाल बंगलादेश बैंकको शेयरमा २ लाख ५६ हजार कित्ता खरिद माग रहेको छ । बैंकको शेयरमा २ लाख ५६ हजार कित्ता खरिद माग आउँदा १ लाख ८४ हजार कित्ता बिक्री आदेश रहेको छ ।
नेपाल बैंकको शेयरमा ३ लाख ८५ हजार कित्ता खरिद माग रहेको छ । ३ लाख ८५ हजार कित्ता खरिद माग रहेको बैंकको शेयरमा १ लाख ३२ हजार बिक्री आदेश रहेको छ ।
त्यस्तै, सिभिल बैंकको शेयरमा ३ लाख ३२ हजार, मेगा बैंकको शेयरमा २ लाख २२ हजार, पु्रभ बैंकको शेयरमा २ लाख १७, सिटिजन्स बैंकको शेयरमा २ लाख ३५ हजार, लक्ष्मी बैंकको शेयरमा २ लाख ६४ हजार र प्राइम बैंकको शेयरमा २ लाख ८५ हजार कित्ता शेयर खरिद माग रहेको छ ।
मनाङमा कोरोना जित्नेको सङ्ख्या बढ्दै ४ हप्ता पहिले
कुपण्डोलबाट गुणस्तरहीन स्यानिटाइजर उत्पादन गर्ने पक्राउ ४ हप्ता पहिले
राष्ट्रपतिले गरिन आयरल्याण्ड,माल्टा र स्लोभाकको राजदूत नियुक्त ४ हप्ता पहिले
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनद्वारा बढी मूल्य तिरी खोप खरीद् नगर्न आग्रह २ हप्ता पहिले
कोरोनाले ५ जनाको मृत्यु, मृत्तकको संख्या ७३ पुग्यो १० महिना पहिले